Sergio Ramos oo FARIINTAN u soo diray Ronaldo kaddib markii la xaqiijiyay inuu ku biirayo Juventus – Gool FM
Sergio Ramos oo FARIINTAN u soo diray Ronaldo kaddib markii la xaqiijiyay inuu ku biirayo Juventus
(Europe) 10 Luulyo 2018. Real Madrid ayaa xaqiijisay in xiddigeeda Cristiano Ronaldo uu adduun dhan 88 milyan oo bound ugu biirayo kooxda Juventus.
Laacibka soo afjaray sagaalka sano uu ku sugnaa gegada Bernabeu ayaa naadiga lagu naaneyso Marwada Duqada ah ka qaadan doona Mushaar dhan usubuuciiba 500,000 oo bound.
Kabtanka Real Madrid Sergio Ramos ayaa fariin qiiro leh u soo diray saaxiibkii Ronaldo kaddib markii la xaqiijiyay inuu caga dhigan doono Juventus.
“Goolashaada, Tirooyinkaaga iyo waxkasta aan ku wada guuleysanay iyagaa iska hadlaya. Boos gaar ah ayaad ka heshay taariikhda Real Madrid . Ka Madridistas ahaan markasta waan ku xusuusnaan doonaa. Faraxad ayay ahayd inaan kaa garab ciyaaro. Hab wayn iyo Nasiib wacan.”. Ramos ayaa sidaa ku soo qoray boggiisa Twitterka.
Shaxda rasmiga ah ee France vs Belgium (Semi Final-ka koobk adduunka)
Sami Khedira oo Ronaldo ku soo dhaweeyay Juventus